Weligaa miyaad mooday inaad fahamtay Ilaah? Waan sameeyaa waana ogahay inaanan ahayn midka kaliya. Had iyo jeer waxaan ku lahaa Ilaah sanduuq. Waxaan moodayay inaan garanayay cida uu yahay iyo waxa uu iga doonayo inaan sameeyo. Waxaan moodayay inaan ogaadey sida ay kaniisaddiisu u ekaan doonto iyo sida kaniisadani u dhaqmi karto.